Jungle Cruise dị ogologo karịa ezinụlọ Disney, mana ọ ka na-atọ ụtọ
O ruola afọ iri abụọ na anọ kemgbe onye isi oche Disney, Michael Eisner bịara na echiche nke ime ihe nkiri na-eme ihe nkiri dabere na ihe nkiri kachasị ewu ewu nke ụlọ ọrụ ahụ. Otu ụzọ n'ụzọ anọ nke narị afọ na ihe nkiri 24 mgbe e mesịrị, ise n'ime ha bụ ...
Melite iOS na macOS Ugbu a iji kpuchido nsogbu a dị egwu
Apple kwadoro ụbọchị efu ọzọ dị na igwe mkpanaka ya (iOS) na desktọọpụ (macOS), ma na-erigbu ya n'ọhịa. Enwere ike iji ahụhụ ahụ mee ihe iji mebie koodu iwu na ikike kernel na ngwaọrụ ...
Mkpọchi mkpọchi: nweta e-agụ Kobo Forma na aka ụra ya na 20% kwụsịrị
Na Olympic, enwere ọtụtụ ihe na telivishọn iji mee ka ị rụọ ọrụ n'oge mkpọchi. Mana ọ bụrụ n’ịbụghị nnukwu onye egwuregwu na-agba agba, ị mekwaala ndepụta bing gị, oge nwere ike ịchụkwudo. N'ime onyinye dị oke egwu, ugbu a ...
Samsung Galaxy Note 21 dochie ya na Galaxy Z Fold 3, onye isi na-akwado
Samsung Galaxy Note 21 agaghị amalite na August 11 dị ka ụfọdụ na-enwe olileanya, mana ndị isi Samsung na-achị ọchị ekwentị ndị nwere ike ịdaba na Samsung Unpacked: Galaxy Z Fold 3 na Galaxy Z Flip 3. «Abụ m nwee obi ụtọ ...
Hostingdị Bochum weebụ: Mbugharị na Ọrụ igwe ojii
Igwe igwe ojii abughi teknụzụ ọhụụ. On-ina nnweta nke Mgbakọ ego nweela ewu ewu kemgbe mid-2000s, na echiche malitere na mmalite 1990. Web hosting is a ...
Amazon Prime Video nwetara otu n'ime ihe nkiri TV kacha mma nke America
Garth Marenghi nke gbara ọchịchịrị bịara Amazon Prime Video na United States. Ihe egwu TV a na-atụ egwu nke 2004 na-apụta ugbu a ka ọ na-asọ, ọkachasị onye isi Knife Out bụ Rian Johnson, otu n'ime ọtụtụ ndị ...